Ukulungiselela ukuhamba kwezikhulu ze-Woza eNanda urban trail, ikhampeyini yokuhlanza yahlelwa ngezi-15 kuLwezi ku-2014. IDurban Green Corridor (DGC) ihlangene ne-Arise & Shine ne Junior Classic F.C. ingxenye yendawo yonke ye-Trial phakathi ko-Ohlange ne Phoenix Settlement yatholwa yilo mphakathi, uqhutshwa ukuhlanzeka. IJunior Classic F.C yayimelwe ngabadlali aba-22 nokhoshi aba-2, uZamokuhle Mnqayi noThubelihle Mnqayi. I-Arise & Shine yayimelwe uFaniza Mbambo, uSfiso Dlamini noLuyanda Mpisi neDGC eyayimelwe uViwe Nkungu, Mlungisi Mthembu noSanele Mvuyane. Izingane zazinikwa amagilavu avikelayo enani eli-70 lezikhwama zikatoti, eziningi ezigcwala ngamahora ambalwa.
Muva komhlangano wokugcina wekomiti elikhulu wonyaka, ukulawulwa kohambo lwezikhulu ezibalulekile zephrojekthi ye-urban trail yahlelwa nge-8 kuZibandlela ku-2014. Ukufaka abahlanganyeli, kwakungothisha bezikole eziseduze, amalunga eSAPS, umphakathi oseduze, i-INK ezokuvakasha ne-Durban Green Corridor. UGary Cullen wamukela futhi wachazela nezikhulu. Abahlanganyeli bona babehlukaniswa ngamaqembu amabili, elokuqala lalilawulwa uMlungisi Mthembu, elinye uThabo Zulu esizwa uSanele Mvuyane. Ngokuqhubeka, izincazelo zanikwa abanandisi basendaweni izindlela zokubuka izinto Kanye nezibonelo zokudla kanye neziphuzo. Ngesikhathi sikancibilijane, iDurban Tourism yakhiqiza iphepha elifaka ukulawula izindlela zohambo eWoza eNanda Urban Trail.